श्वेता भन्छिन् ! ‘तेस्रो बिहे गर्न मन छ नगर भन्छन्, के मेरो बिहेकाे खर्च उनीहरुले तिर्नुपर्ने हो’ ? – hamrosandesh.com
श्वेता भन्छिन् ! ‘तेस्रो बिहे गर्न मन छ नगर भन्छन्, के मेरो बिहेकाे खर्च उनीहरुले तिर्नुपर्ने हो’ ?
श्वेता तिवारीले आफूले श्रीमानबाट घरेलु’ ‘हिं -सा ख-प्नु परेकोले २ वटा वैवाहिक टिकाउन नसकेको गु’नासाे पाेखेकी छिन् । श्रीमानसगँ राम्राे स म्बन्ध नरहेकाे र दैनिक हिं -सा स-हनु परेकाे उनकाे भनाइ रहेकाे छ । आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा धेरै उतार चढाव भोगेकी श्वेताको किशोरावस्थामा राजा चौधरीसँग विवाह भएको थियो। २७ वर्षको उमेरमा उनले घ-रेलु हिं साको आ रोप लगाएर राजासँग सम्बन्ध-विच्छेद गरिन् । सन् २०१३ मा उनले अभिनव कोहलीसँग विवाह गरेकी उनको दोस्रो विवाह पनि टिकेन।